7-macalin oo sharaxan inay Maurizio Sarri shaqada Chelsea ka badalan inta lagu maqan yahay kulamada xulalka – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Talaado, Maarso, 19, 2019 (HNN)- Maamulka kooxda Chelsea ayaa isla garteen in macalin Maurizio Sarri shaqada kooxda laga racadeeyo inta lagu maqan yahay kulamada xulalka aduunka cayaarayaan todobaadkan maal maha ka harsan iyo todobaadka dambe.
The Express ayaa ogaatay in dhaq dhaqaaq xoogan uu ka socdo gudaha garoonka Stamford Bridge sidoo kalena ay u badan tahay 31-bishan Maarso Chelsea kulanka ay la cayaarayaan Cardiff City in macalin cusub kooxda keedkeeda soo fariisto!
Haddaba waa kuma macalimiinta u sharaxan inay Maurizio Sarri shaqada Blues ka badalaan todobaadkan gudihiisa ama todobaadka dambe horaantiisa:
Steve Holland: haatan waa tababaraha labaad xulka Ingiriiska sidoo kalena horey labo jeer ayuu macalin labaad Chelsea kaga noqday wuxuuna ka hoos shaqeeyay macalimiintii horey Blues usoo hogaamiyeen Andre Villas Boas, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, Jose Mourinho, Guus Hiddink iyo Antonio Conte.
Laurent Blanc: haatan waa shaqo la’aan balse wuxuu horey usoo maamulay Bordeaux, France iyo PSG.
Nuno Espirito Santo: waa macalinka hadda hogaamiyo kooxda Wolves.
Jose Mourinho: haatan waa shaqo la’aan balse horey Blues labo jeer oo kala duwan ayuu usoo maamulay.
Diego Simeone: waa macalinka kooxda Atletico Madrid hogaamiyo.
John Terry: haatan waa tababaraha labaad kooxda Aston Villa horeyna waayihiisa cayaareed inta ugu badan Blues kusoo qaatay.
Max Allegri: waa tababaraha haatan leyliyo Juventus.
7-macalin oo sharaxan inay Maurizio Sarri shaqada Chelsea ka badalan inta lagu maqan yahay kulamada xulalka added by admin on 19/03/2019